‘सटडाउन’ भनेको के हो ? कुन–कुन सेवा बन्द हुन्छन् ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/‘सटडाउन’ भनेको के हो ? कुन–कुन सेवा बन्द हुन्छन् ?
‘सटडाउन’ भनेको के हो ? कुन–कुन सेवा बन्द हुन्छन् ?
तर, शान्ति सुरक्षा, ठाडो निवेदन र उजुरी, मुद्दा, अत्यावश्यक सवारी पास र विपद् सम्बन्धी कार्य भने यथावत् रहन्छन् ।आफ्नो कार्यालयको चाप घटाउन प्रशासन कार्यालयहरुले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । अन्य कार्यालयले भने आफ्ना सेवा कटौतीबारे निर्णय स्वयं आफै गर्नेछन् । नागरिक सचेत हुने, स्वास्थ्य सजगता नअपनाउने हो भने लकडाउनको अवस्था आउन सक्छ ।